Uggurrii Huwaei mudate maaliif Afriikaa yaadesse? - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Irra caalaan lammiilee Afrikaa har'a moobayiloota Chaayinaa rakkasaan bitamaniin inteneetii fayyadamu.
Haala Huawei mudateen walqabatee motummoonni Afriikaa fi fayyadamtoonni teknoolojii Ameerikaa ykn Chaayinaa filachuu ni dirqamuu laata?
Murteen Google sooftiweerii isaa Huwaei'f dhorkuuf murteesse, jalqabbii waraana teknooloojii jaarraa kanaati jedhu xinxaltoonni.
Akka yaada namoota BBC'n dubbiseetti haalichi biyyoota afriikaa akka teknoloojiiwwan Chaayinaa fi US keessaa tokko akka filataniif kan dirqisiisuudha.
Biyyootni afriikaa har'a intarneetii fayyadaman irra caalaan bilbila 'Smartphone' Chaayinaan hojjatee kan akka Huwaei'tti fayyadamu.
Keeniyaan lammilee Chaayinaa irratti himata bante
''Huwaein sararawwan caasaa bu'uraalee IT Afriikaa ammaa guddaa kan ijaare. Osoo Ameerikaan kaampaanicha gufachiisuun fiixaa baate, miidhaan damee teknoolojii garmalee guddataa jiruu mudatu cimaa ta'u danda'a,'' jedha Erik Olaandar pirojaktii Chaayinaa Afriikaa Kibbaatti argamu irraa.
Pirezidaantiin Ameerikaa Donaald Traampi michoonni Ameerikaa hundi walitti dhufeenya Huwaei waliin qaban akka dhaabaniif duula gaggeessa jiru.
Kanaafis nageenyi kaampaanichaa balaa qaba sababii motummaan Chaayinaa akka basaasu heyyamuuf jechuun sababa himu.Kaampaanichi garuu irra deedeebiin himannaa kana haaleera.
Dulli Ameerikaa kunis waan Itti gaafatamaan Google duraanii himanii turan ''intarneetii Chaayinaan hoggantuufi kan Chaayinaan ala Ameerikaan hoggantu jidduutti gargar baatiin ni umama'' jedhan sun umamu mala.
Kun taanaan ammoo, Afriikaan kamiifuu loogu hin qabaattu jechuun BBC'tti himte Haaret qondaalli Sino-Afriikaa.
''Waraanichi kan keenya miti. Kanaafuu kun akka nuuf hojjatu irratti hojjachuu qabna,'' jettee jirti.
Biyyoonni Afriikaa waliin ta'un ummata saanii barsiisuu fi fayyadamtoota Afriikaatiif seera eegumds daataa irratti walii galu qabu jetti, Kaariik.
''Tarii yeroo kunis yeroo Afriikaan calliftee ilaaluu dhiisuun teknoloojii gabaa isa sirri ta'e itti ijaarachu qabdudha. Biyyoonni Afriikaa waliin ta'uun yoo koloneeffannaa dijitaalii kufaa jiru kana ofiirraa dhiiban arguun barbaada,'' jetti. 'Hamma odeeffannoo Gamtaa Afriikaa'
Yaaddoon Huwaein walqabatee tibbana ka'aa jiru kunis Komunikeeshinii biyyoota Awurooppaan kan walqabate ta'ulleen kana dura haala nageenya daataan wal qabatee Afriikaa keessa himannaawwan kubaaniyaa Chaayinaarratti ka'aa turaniiru.
Gaazeexaan Faransaayii Mondi jedhamu tokko akka barreesseetti, waajjirri gamtaa Afriikaa kan Finfinneetti argamu keessatti sirni kompitaraa Huwaein diriiree daataa hatuun ifa ta'ee jechuun gabaaseera.
Ragichi dabaluun wajjiricha irraa waggoota shaniif ragaaleen halkan wallakkaa magaalaa Chaayinaa Shaangaayiitti dabarfamaa ture jechuun beeksiseera.
Himannaan kunis qondaaltoota Gamataa Afriikaa fi Chaayinaatiin haalameera.
Goodayyaa suuraa Waajjira Gamtaa Afriikaa daataan Huwaein hatamee
Huwaeinis Afriikaa keessatti bilbilawan hammaayaa gabaaf dhiyeessu dabalatee hojiiwwan telekomunikeshinii gurguddaa hojjataa jira.
Afriikaa Kibbaatti Institiutii Dhimmoota addunyaa keessatti qo'ataa olaanaa dhimmaa Afriikaa fi Chaayinaa kan ta'an Koobas Vaan Sitaadan BBC'tti akka himaniitti sararawwan intarneetii 4-G Afriikaa keessatti argaman irra caalaa kan diriirse Huwaei dha.
Hiwaawween Afriikaa keessatti:
Biyyoota 40 keessatti hojjata
Yoo xiqqaate intarneetii 4-G afriikaa %50 diriirseera.
Pirojektii magaalaa ammayaaf teknolojii ni dhiyeessa.
Pirojaktiiwwan ismaartii magaalaaf teknolojii dhiyeessa
Walta'insaan qorannoo heddu gaggeessa
Dhiyeessaa bilbilawwan smaart gurguddaa keessaa arfaffaa
Huwaeinis yeroo jalqabaatiif waajjirasaa Afriikaa keessatti kan saaqee waggoota 10 dura yoo ta'u, haala sadarkaa waliigaltee teknolojii 5-G argachuu isa dandeessisu irratti argama.
Keeniyaan lammilee Chaayinaa 'kaffaltii baaburaa waliin dhahan' irratti himata bante